Umtshato - Marriage
UMTSHATO UJONGWA NJENGOSEMTHETHWEN
i-Matrimonial Property Act 88 yowe-1984
Enoba sowutshatile okanye ulungiselela ukutshata, kubalulekile ukwazi ukuba lo Mthetho uzichaphazela ngokuthe ngqo izinto zakho onazo. Ngoko ke, kubalulekile ukuba uwuqwalasele ngokusondeleyo.
Le ncwadana lushwankathelo nje olufutshane lwezona zinto zibalulekileyo ezikulo Mthetho. Uyakhuthazwa ukuba udibane nommeli wakho ukuze uqinisekise ukuba izinto zenziwa ngokufanelekileyo nangendlela ofuna zenziwe ngayo.
Imitshato equlunqwe ngaphambi komhla wokuqala kuNovemba 1984
Ukuba phambi kokuba utshate ubungenalo uxwebhu oluzotyiweyo, nitshata ngokuvumelana ukuba nizakohlulelana ngezinto eninazo, kodwa wena neqabane lakho ningafaka isicelo kwiNkundla ePhakamileyo nanini na ukuba nifuna ukutshintshela nakweziphi ezinye izivumelwano zokungahlulelani ngezinto eninazo; nokuze nifumane nezinye iindlela ezahlukeneyo eninokuzisebenzisa emtshatweni wenu. Kukho, kwangaxeshanye, izinto ekufuneka zilandelwe xa usenza oko.
Ukuba utshate phantsi kwesivumelwano sokungohlulelani ngezinto eninazo (isivumelwano saphambi kokutshata safakwa) ungakwazi ukusitshintshela phantsi kwesivumelwano sokwahlulelana ngezinto eninazo. Naku oko nimele nikwenze nobabini kwiNkundla ePhakamileyo.
Ummeli wenu nguye oya kunichazela ngazo zonke izinto eziyimfuneko.
Imitshato equlunqwe emva komhla wokuqala kuNovemba 1984
Umthetho wokubhalisa iimpahla owukhethayo uya kuchaphazela ikamva lkaho kwezemali nemeko- bume yezinto zakho onazo.
Yenza ukhetho ngokolwazi onalo. Ukhetho lwakho lulo oluya kuchaza amalungelo onawo ngokuphathelele kwimpahla yakho ngexa usemtshatweni, nangokuphela kwawo ngenxa yokufa okanye uqhawulo-mtshato.
Loluphi ukhetho lwakho?
Umtshato wesivumelwano sokwahlulelana ngezinto eninazo okanye isivumelwano sokungahlulelani ngezinto eninazo. Ukuba ngaba sisivumelwano sokungohlulelani ngezinto eninazo: nenkqubo yezinto ezongezelelekieleyo okanye akunjalo.
Isivumelwano sangaphambi komtshato esivumelana neemfuno zakho nenkqubo yezinto ezongezelelekileyo okanye akunjalo.
Isivumelwano sangaphambi komtshato esivumelana neemfun zakho nenkqubo yezinto ezongezelelekileyo okanye akunjalo?
Isivumelwano sokwahlulelana ngezinto eninazo siyasebenza ukuba utshata ungenzanga sivumelwano saphambi komtshato ngaphambi komtshato wakho.
Inkqubo yezinto ezongezelelekileyo iyasebenza xa ungene kumtshato wesivumelwano sokungohlulelani ngezinto eninazo ngokwesivumelwano sokungohlulelani ngaphandle kokungakhutshwa ngokupheleleyo kwezinye zeendlela ezohlukeneyo. Inkqubo yezinto ezongezelelekileyo inokufaneleka, ngomzekelo, ulungiselelo lokugqibela lokwahlulahlula ilifa elongezelelekileyo ayiyi kulingana phakathi kwenu, kodwa kolunye ubalo okanye inkqubo yezinto ezongezelelekileyo ayiyi kusebenza ukuba umtshato uqhawukile okanye omnye kubo akasekho. Naliphi ilungiselo lesivumelwano saphambi komtshato linokwenziwa, kuphela ukuba alichasenanga nomthetho okanye lamkelekile.
YEYIPHI INKQUBO ELUNGILLLEYO?
Inkqubo enye esebanzayo kwabanye ayithethi ukuba iyasebenza kuso sonke isibini. Kuxhomekeka kwiimfuno nakwiimeko zesibinin eso. Dibana nommeli wakho, uwedwa ukuba ukhetha njalo. Musa ukuvumela intliziyo yakho ilawule ingqondo yakho.
Umtshato wesivumelwano sokwahlulelana ngezinto eninazo
Omabini amaqabane ohlulelana ngezinto ngokulinganayo.
Amaqabane anamandla alinganayo ngokwasemalini (ngaphandle kweemeko ezikhethekileyo) nasekuzenzeleni isigqibo.
Imvume ebhalwe phantsi yomtu ngamnye ibalulekile ngokukhethelkileyo kwimiba ephathelele nezentengiselwano njengezo zibandakanya indlu, isibambiso nezivumelwano zamatyala. Ezinye iimvume ziyafuneka kweminye imiba yezentengiselwano enjengokuthengiswa kwezinto zendlu zodibaniselwano, njengefenitshhala.
Imvume ayiyomfuneko kwezentengiselwano ngokuphathelele nokuthenga nokuthengisa, ishishini okanye umsebenzi owenziwa liqabane elo.
Lo mthetho uyabakhusela abatshati ukuba omnye omnye esenza ngendlela ecalucalula omnye.
Le nkqubo isebenza kumgaqo ocacileyo wokuba umtshato ludibaniselwano yaye olo dibaniselwano lunokwenziwa xa umtshato ululwalamano olunoxolo nolonwabo. Ikhuthaza kokubini ukulingana ngokwasemthethweni nakwezoqoqosho kumaqabane omabini. Emtshatweni nasekupheleni kwawo omabini amaqabane afanele afumane isiqingatha solwahlulo kwizinto zodibaniselwano yaye ngamnye unamandla alinganayo olawulo.
Ukungakwazi ukuhlawula amatyala kwelinye iqabane kuchaphazela zonke izinto eninazo. Xa ukungakwazi ukuhlawula kuvela, ayiyonkqubo ikhuthazwayo. Inkqubo yamandla alinganayo iyasebenza, xa kunokwenzeka ukutshintsha kwelinye okanye omabini amaqabane akuhambiselani, oko kubangela ingxabano emtshatweni.
Umtshato wesivumelwano sokungahlulelani ngezinto eninazo nenkqubo yezinto ezongozelekileyo
Emtshatweni iqabane ngalinye linelungelo lokulawula izinto zalo, linokwakha indawo yalo yaye ngamnye umelana nawakhe amatyala.
Ukuphela komtshato ngenxa yokufa okanye uqhawuolo-mtshato, ixabiso lezinto eziqokelelweyo emtshatweni (izinto ezongezelekileyo) zohlulahlulwa ngokulinganayo. Izinto ezongezekileyo zixhomekeka ekubeni umahluko welona xabiso lomhlaba kwiqabane ngalinye uze ususe ixabiso lawo lokuqala langaphambili komtshato kuxhomekeka kukwehla nokunyuka kwamaxabiso, amatyala, nezinto ebezingabalwanga kwisivumelwano sangaphambili komtshato, umonakalo ongabandakanyekanga kwilifa, amafa afunyenweyo, indlalifa neminikelo. Xa uphela umtshato umahluko phakathi kwezinto ezongezekileyo kuloo mihlaba mibini, njengoko ixhomekeka, iye yohlulwe ngokulinganayo.
uMthetho uvumela iqabane ngalinye labe izinto ezongezelekileyo kumtshato ophelayo.
Inkqubo yezinto ezongezelekileyo yeyezi mini, yinkqubo elungileyo nesebenzayo kulwalamano lomtshato olunoxolo.
Emtshatweni, ilungelo lamaqabane lokwaba izinto zalo alisikelwanga mda nangayiphi na indlela, ngaphandle kokuba omnye wabo wongamela ilungelo lomnye lokwaba izinto ezongezelekileyo.
Inika ukhuseleko ngoxa umtshato usekho, ngokomzekelo, ukungabikho kwelinye lamaqabane, kwangaxeshanye, xa uphela umthsato igabane ngalinye lifumana ulwabiwo olulinganayo lwezinto ezongezelekileyo.
Isithintelo esinokubakho, ngokukhethekileyo kwiqabane elisisityebi, kusenokwenzeka livakalelwe kukuba alinankululeko ingako yokwaba izinto kuba elinye linokuya enkundleni kulwahlulo olukhawulezileyo lwezinto ezongezelekileyo., xa esenokuvakalelwa ngolo hlobo, ngokungenela kwintengiselwano ethile, unokufuna, ukulawula ilungelo lakhe lokwaba izinto ezongezelekileyo. Oku kusenokubangela ingxabano.
Esinye isithintelo senkqubo yezinto ezongezelekileyo sesokuba amaqabane akabelani ekunikweni ngetyala, nto leyo esonokuphumela ekubeni umfazi ongasebenziyo angakwazi ukubekwa tyala ngexa esemtshatweni xa umhlaba wakhe umncinci.
Khumbula: Ungayifuni inkqubo yezinto ezongezelekileyo isebenze, imele ichazwe ngokukhethekileyo kwisivumelwano saphambi komtshato.
Umtshato wokungohlulelani ngezinto eninazo ngaphandle kwenkqubo yezinto ezongezelekileyo
Ungacela ukuba ummeli wakho akuzobele isivumelwano saphambi komthsato esivumelwano saphambi komtshato esivumelana neemfuno zakho.
Isivumelwano esinjalo siyacebiseka xa:
Omabini imaqela ingoosomashishini abaphezulu ngokukhethekileyo abarhola imali ezinkulu naxa bengafuni kuba nabantwana;
Enomdla wokuba nabantwan kumtshato wesibini nakweminye imitshato ezayo.
Kwezi meko umcebisi ozimeleyo osemthethweni kwiqela ngalinye uyimfuneko ngakumbi kwibhinqa, esekulixesha lingasebenzi ngenxa yeembopheleleko zekhaya, ukuqinisekisa ukuba iimfuno zabo zikhuselwe kakuhle.
Ukuphela komtshato, amaqabane akanakufuna izinto zelinye iqabane kumhlaba walo;
Umtshato ongabhaliswayo wenziwa phantsi komthetho wesiko, ukulanda nokusebenzisa amasiko esintu kuyenziwa ngabanye kubantu baseMzantsi Afrika abalanda isiko labantu babo. Umtshato ongabhaliswayo ujongwa njengosemthethweni ukuba uhambiselana nolungiselelo lweNdlela ojongwa ngayo uMtshato ongabhliswayo we-Act 120 yowe- 1998. Ukuba umtshato wokuqala usisivumelwano sokwahlulelana ngezinto eninazo ngokuvumelana nomthetho oyi (Matrimonial Property Act, 1984).
Ukhuseleko lunika indoda nomfazi abatshate ngaphambi komhla wokuqala kuNovemba 1984 isivumelwano sokungohlulelani ngezinto eninazo xa kunokufumaniseka ukuba elinye iqabane liye lakha okanye lalungisa umhlaba omkhulu lingafakanga sandla elinye iqabane. Inkundla inokugqiba enoba iyazaba na izinto zelinye iqabane kwelinye ngokuvumelanayo.
Izipho abaphana zona abatshati akunakwenzeka zibuyiselwe emva. Noko ezo zipho ziyakuhlala zingaphantsi kwemimiselo yoMthetho Wokuphelelwa Zimali (Insolvency Act) noMthetho weRhafu (Income Tax Act).
Indoda nomfazi, ngamanye amaxesha, banokuba nebango omnye komnye nangona betshate phantsi kwesivumelwano sokwahlulelana ngezinto abanazo, kumba ofana neengozi zemoto.
Abantu abatshate phantsi kwenkqubo yezinto ezongezelekileyo okanye abavumelene ngokwehlulelana ngezinto, bobabini bamele basebenzisane kwizinto zodibaniselwano zendlu. Kumtshato osemva komhla wokuqala kuNovemba 1984, xa elinye iqabane linikela ngaphezu kwesahlulo sakhe, linokuba nebango lendleko eseleyo, ukuba oko kwakusisivumelwano kusengaphambili.
Ummeli wakho uya kukulungiselela inkcazelo efunekayo.